Cabdi Qeybdiid oo maanta si aan caadi ahayn uga hadlay weerarkii lagu dilay askartii Galmudug (DHAGEYSO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Cabdi Qeybdiid oo maanta si aan caadi ahayn uga hadlay weerarkii lagu dilay askartii Galmudug (DHAGEYSO)
Madaweynihii hore ee Galmudug Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo maanta dib ugu laabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, ayaa si xoogan u cambaareeyay weerarkii dhinaca cirka ahaa oo laba maalmood kahor ay Mareykanku ku dileen askar badan oo ka tirsan ciidanka Galmudug.
Cabdi Qeybdiid oo boqolaal ruux kula hadlay magaalada Gaalkacyo ayaa marka hore dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka reer Galmudug-ba kaga tacsiyadeeyay duqeynta lagu laayay askartii ku sugneyd deegaanka Jeexdin ee duuleedka magaalada Gaalkacyo.
“Walaalayaal waxaan maanta u nimid oo aa rabnaa aniga iyo ragga ila socdaba inaa idinla qeybsano tacsidda iyo baroordiiqa aa maalintii seddaxaad banaanka u taagan tihiin, waxaana dhamaanteena ka tacsiyeynaynaa dhamaan wiilashii lagu xasuuqay weerarkii foosha xumaa ee loo geystay deegaanka Galmudug” Sidaas waxaa yiri Cabdi Qeybdiid.
Jeneraal Cabdi Qeybdiid ayaa dhinaca kale Puntland ku eedeeyay in seddaxdii maalmood ee lasoo dhaafay oo ay shacabka reer Galmudug banaan-baxyada ka wadeen magaalada Gaalkacyo, in dhinacoodana ay uga dabaal-degayeen duqeyntaasi, oo ay ku andacoonayan in lagu fashiliyay weerar kaga soo wajahnaa Xarakada Al-shabaab.
Sidoo kale, wuxuu Cabdi Qeybdiid dowladda federaalka Soomaaliya iyo Mareykanka ugu baaqay inay soo magacaabaan guddi xaqiiqa raadin ah, oo soo kormeera goobtii ay duqeyntu ka dhacday, si ay meesha kaga saaraan wararka xaqiiqda ka baxsan, raali-gelin iyo magdhow-na looga siiyo Galmudug.
“Walaalaheena Puntland, waxaan leenahay walaalayaal waxa la dilay waa walaalihiin, waxa la dilay waa wiilashiinii, waxa la dilay kuwii berri ku kaalmeen lahaa Qarankaan iyo Soomaaliyana wax u tari lahaa, marka waxaan leeyahay way khaldameen, arritaasi xisaab bayse galeysaa, ee xisaabta noogu darra.” Sidaasi waxaa yiri Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid.
Ugu dambeyntii, Jeneraal Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa ugu baaqay maamulka Galmudug iyo shacabkaba in la muujiyo deganaan islamarkaana ay caadifadda iyo xanuunku ka awood badanin, isagoona sheegay in wax walbo oo khilaaf iyo isfaham-waa ah lagu dhameeyo miiska wada-hadalka.